एसियाकै ठूलोमध्येको मोडलिङ प्रतियोगितामा उत्कृष्ट-१३ भएका विवेक :: Setopati
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, माघ ११
विवेक खड्का। तस्बिर सौजन्यः फेस अफ एसिया
सानो छँदा उनी निकै 'रिजर्भ' प्रकृतिका थिए। लजालु अनि आफैंमा रमाउने। स्कुलमा कसैले केही भने चुपचाप सहन्थे। विवादबाट टाढै रहने र घरमा समेत खुलेर नबोल्ने।
तर अहिले उनी आफ्नो र देशका लागि बोल्दैछन्। आफ्नो कामले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने प्रयासमा छन्। उनी हुन्, २३ वर्षीय विवेक खड्का।
विवेक पेसाले मोडल हुन्। हालै दक्षिण कोरिया, सोलमा सम्पन्न 'एसिया मोडल फेस्टिभल' अन्तर्गतको 'फेस अफ एसिया-२०२०' मा उनले टप- १३ स्थान हात पारेका छन्।
'यो निकै गर्वको कुरा हो,' एसियाकै ठूलोमध्ये र विश्वमा पनि चर्चित मानिने यो मोडलिङ प्रतियोगितामा पाएको सफलताको खुसी साट्दै विवेकले सेतोपाटीलाई भने।
विगत १५ वर्षदेखि भइरहेको यो प्रतियोगितामा यसअघि नेपाल कहिल्यै यो स्थानसम्म पुगेको थिएन। सन् २०२० को प्रतियोगितामा २६ देशका ७८ सहभागी थिए। नेपालबाट विवेकसँगै नफिसा श्रेष्ठ र स्मृति नेपालले प्रतिस्पर्धा गरे। तीनै जना 'फेस अफ नेपाल-२०२०' का विजेता हुन्। नफिसा र स्मृति प्रतियोगिताबाट बाहिरिए पनि विवेकले नेपाललाई अगाडि बढाउन मद्दत गरे।
फेस अफ नेपाल-२०२० का विजेता विवेक खड्का। तस्बिर सौजन्यः विवेकको सामाजिक सञ्जाल
कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल रूपमा भएको प्रतियोगिता गत डिसेम्बर ४ मा सकिएको हो। यो सात महिना लामो कार्यक्रम थियो। यो अवधिभर प्रतियोगीलाई विभिन्न काम (टास्क) दिइन्थ्यो। उनीहरूले आ-आफ्नो ठाउँबाट आयोजकले भनेअनुसार काम गरेर भिडिओ र फोटो पठाउँथे।
'भर्चुअल भएकाले मैले केही कुरा मिस गरेँ। तर धेरै कुरा सिकेँ,' विवेकले नयाँ प्रविधि सिकेको बताउँदै भने, 'डा. ओरेकल भन्ने कस्मेटिक कम्पनीको फेसवासको सानो विज्ञापन बनाएर पठाउनुपर्ने थियो। दसैंतिरको कुरा हो। मसँग क्यामरा थिएन। भिडिओ खिचिदिने, त्यसलाई सम्पादन गरिदिने कोही भएन।'
त्यही बेला उनको घरमा आमाबुवालाई कोरोना देखियो। उनी र दाइलाई नेगेटिभ थियो। आफू ठिकै भएकाले विवेकलाई दिइएको काम जसरी नि गर्नु थियो।
'टास्क गर्न मोबाइल बोकेर नगरकोट गएँ,' उनले भने, 'त्यहाँ झरनामा गएर फेसवासले मुख धोएको खिचेँ। मोबाइलबाटै भिडिओ सम्पादन गरेँ। १५-२० सेकेन्डको विज्ञापन‍ तयार पारेर पठाएँ।'
विवेकको यो भिडिओ आयोजकले मनपराए।
'नयाँ तरिकाले भिडि‌ओ बनाउने सोचले झरना पुगेको थिएँ। कन्सेप्ट मनपराए,' उनले भने। यो प्रतियोगितामा सहभागी भएर उनले धेरै कुरामा आत्मनिर्भर हुन र समयको महत्व बुझेको बताउँछन्। गायनमा रूचि भएका विवेकले टास्क क्रममा कोरियन गीत गाएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय मोडलिङ प्रतियोगितामा नेपाली पुरुष मोडल कमै पुगेका छन्। त्यो थोरैको सूचीमा आफूले नाम लेखाए पनि विवेक भन्छन्, 'यो स्थानलाई बामे सरेको मात्र भन्न मिल्छ।'
मोडल हन्ट नेपाल-२०१६ बाट यो क्षेत्र प्रवेश गरेका विवेकका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मोडलिङ कार्यक्रम र प्रतियोगितामा पुग्नु मात्र ठूलो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मोडलले नेपाली सामग्री चिनाउन सक्षम हुनु सफलता हो।
'हाम्रोमा मोडलिङ र फेसन क्षेत्रबारे निकै कम ज्ञान छ। पेजेन्ट र मोडलिङ एउटै सोच्ने जमात बढी छ,' विवेक भन्छन्, 'नेपालमा फेसन क्षेत्र नै छैन भन्दा हुन्छ!'
तस्बिर सौजन्यः विवेकको सामाजिक सञ्जाल
मोडलिङ भन्नाले कुनै ब्रान्ड प्रतिनिधित्व गर्ने, रनवे र फेसन सो लगायतमा सहभागी हुने भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् विभिन्न कलाकार, डिजाइनरले कुनै एक पूर्वनिर्धारित विषयवस्तुमा मोडलमार्फत कला प्रस्तुति गर्छन्। अर्कातर्फ पेजेन्ट व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ। यसमा प्रतिस्पर्धी/सहभागीले आफूमा भएको खुबी देखाउनुपर्छ।
हामीकहाँ भने मोडलिङको गलत परिभाषा भएको विवेक गुनासो पोख्छन्।
'नेपालमा त अभिनेत्री, ब्युटी पेजेन्ट विजेता लगायत जो पनि मोडल भन्ने भइसक्यो,' उनले भने, 'मोडल भन्नेबित्तिकै म्युजिक भिडिओ र फिल्ममा खेल्छन् भन्ने अर्को गलत बुझाइ छ।'
यी सबबारे विवेकले देखे-भोगेर जानेका हुन्। सानामा लजालु र ढिलो बुझ्ने स्वभाव भए पनि हुर्कने क्रममा आफूमा परिवर्तन आएको उनी बताउँछन्। कक्षा ८ मा स्कुलबाट स्काउट नेतृत्व गर्न थालेपछि उनले बदलाव महशुस गरेका हुन्।
'जब आफूमा जिम्मेवारी आउँछ, त्यसपछि नेतृत्वदेखि हरेक कुरा व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने त्यसबेला बुझेँ,' उनले भने, 'आफ्नो सहज क्षेत्रबाट बाहिर निस्किँदै गएँ।'
बानेश्वरस्थित इङ्लिस प्रिपरेटोरी स्कुलबाट एसएलसी सकेर उनी प्लस-टु पढ्न युनाइटेड कलेज भर्ना भए। आफ्नो स्वाभाव खुला बनाउन उनले पानीपुरी-कुल्फी ठेला व्यापारीलाई सामान बेच्न र गाडी चढ्दा सहचालकलाई सघाउन थाले। यस्तै गतिविधिले उनको अन्तर्मूखी स्वाभाव फुक्दै गयो।
प्लस-टु सकेपछि उनी इञ्जिनियरिङ तयारीमा थिए। त्यही बेला मोडल हन्ट नेपाल-२०१६ बारे सुने।
'आफ्नो दायरा बढाउन मोडल हन्टमा सहभागी भएँ। तर मोडलिङमै लाग्छु भन्ने सोचेको थिइनँ,' आफैंलाई बुझ्न लिएको निर्णयमा परिवारको समर्थन मिलेको उनले बताए।
उनी मोडल हन्ट नेपाल-२०१६ का विजेता घोषित भए। यसपछि उनी ताइवानमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय ब्युटी पेजेन्ट, मिस्टर ओसन-२०१७ मा सहभागी भए। त्यहाँ ५२ प्रतियोगीमध्ये विवेक शीर्ष १७ सम्म पुगे।
उपाधि हात नपारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट नयाँ कुरा सिकेको उनी बताउँछन्, 'त्यही बेलादेखि अन्तर्राष्ट्रिय मोडलिङ प्रतियोगितामा जाने सोच थियो जुन सन् २०२० मा पूरा भयो।'
ताइवानमा भएको प्रतियोगितापछि उनले फेस अफ नेपाल-२०२० को तयारी गरेका थिए। यसमा जित हात पारेसँगै फेस अफ एसिया-२०२० मा सहभागी भएका हुन्।
ताइवानबाट फर्केपछि विवेकलाई कामको प्रस्ताव पनि आउन थाल्यो। गोल्डस्टार, टुबर्ग, कार्ल्सबर्ग, यामाहा, किङफिशर र सनराइज बैंक लगायत कम्पनीका विज्ञापनमा मोडलिङ गरे। अचेल उनी 'अभियन्ता' नामक निर्माण कम्पनीमा कार्यरत छन्।
विवेक आफूलाई यहाँसम्म आइपुग्न परिवार र साथीभाइको सहयोग र प्रोत्साहनले सहज भएको बताउँछन्। तर धेरैले आफ्नो इच्छा हुँदाहुँदै अरूले के भन्छन् भन्ने सोचेरै यो क्षेत्रमा प्रवेश नगरेको देख्दा उनलाई दुःख लाग्छ।
'एउटै समाजमा बस्दा कतिले राम्रो र कतिले नराम्रो सोच्नु स्वभाविक हो। सकारात्मक कुरा भए सुन्ने र नकारात्मक भए बेवास्ता गर्ने। गलत गरेको छैन, समाजको हरेक प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक ठान्दिनँ,' उनी आफू खुसी हुनुलाई प्राथमिकता दिन्छन्।
मोडलिङ क्षेत्रमा महिला मात्र लाग्छन् भन्ने गलत धारणा र बुझाइ पनि जरैदेखि उखेल्न लागि परेका छन् उनी। यतिबेला नेपाली ब्रान्डहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउने कोशिसमा पनि छन्। बिबिए पाँचौं सेमेस्टर अध्ययनरत उनी मोडलिङ र ब्रान्डिङ बुझ्न व्यवसाय बुझ्नपर्ने जरूरी ठान्छन्।
'नेपालमा दीर्घकालिन सोचले आफ्नो ब्रान्डको विज्ञापनमा लगानी गर्नै सकेका छैनन्। यहीँका मोडलमा ब्रान्डिङ लगानी गर्ने हो भने भोलिका दिनमा विदेशी ब्रान्ड नेपाल आएर विज्ञापन गर्न सक्छन्,' उनले भने।
विवेकका अनुसार नेपाली कपडाहरू अल्लो, ढाका, पस्मिना लुगाको, झोला वा अन्य सामानको 'शो' गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि विदेशी ब्रान्ड नै प्रचारनिम्ति नेपाल भित्रिने सम्भावना उनले देखेका छन्।
'व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्ने हो भने हामीसँग न्यूयोर्क फेसन विक पाटनमा गर्नसक्ने क्षमता छ,' विवेक आशावादी सुनिन्छन्। काम गर्ने तौरतरिका फेरेर नेपाली मोडलिङ तथा फेसन क्षेत्रलाई बढावा दिनसक्नेमा उनी विश्वास राख्छन्।
केही समयपछि मोडलिङकै निम्ति चीन, कोरिया, मंगोलिया जाने कार्यक्रम बनाएका विवेक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै नेपाली ब्रान्ड बजारमा विस्तार गर्ने बताउँछन्।
'नेपालमै व्यवस्थित हिसाबले फेसन शो गर्न मन छ,' कर्ममा विश्वास राख्ने विवेक आफ्नो योजनाबारे भन्छन्, 'यसरी नेपाली कला, संस्कृति, भेषभूषा फेसन र रनवेमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउनुका साथै यो क्षेत्र विकास गर्ने अवसर मिल्छ।'
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ११, २०७७, ०३:३८:००